[16 / 10 / 2019] Alstom फाउंडेशन 25 नयाँ परियोजना विश्वव्यापी समर्थन गर्न	33 फ्रान्स
घरटर्कीMarmara क्षेत्र11 BilecikBilecik ट्रेन दुर्घटनाको बारेमा डरलाग्दो दावी!
Bilecik ट्रेन दुर्घटनाको बारेमा डरलाग्दो दावी!
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 11 Bilecik, रेल, साधारण, फास्ट ट्रेन, HEADLINE, Marmara क्षेत्र, टर्की 1
Bilecik मा ट्रेन दुर्घटना
CHP Eskişehir उप UtkakkurÇzer बिलीसेक मा उच्च-गति ट्रेन लाइन कन्ट्रोलिंग गाईड ट्रेन को पटरीबाट एक परिणाम को रूप मा भएको कि दुर्घटना पछाडि गएको दाबी सार्वजनिक सार्वजनिक साझा।
Çakırözerले भन्यो कि सुरुnel निर्माणको काम पूरा हुनु अघि सेवाको लागि खोलिएको थियो। थप रूपमा यो पनि थाहा छ कि यस सुरुnelमा निर्माण कार्यको क्रममा सुरुnel बिग्रियो र एउटा निर्माण मेसिन यस टनेलमा रह्यो र त्यसपछि कामहरू रोकियो। हामी देख्छौं कि यो लाइन पूर्वाधार निर्माण नगरी सेवाको लागि खोलिएको छ। हामीले सडक, रेल लाईनको लागिका लागि गरेका छौं र यी मसिन्स्टहरूको तर्फबाट पर्याप्त सुरक्षा उपायहरू गरिएको छैन जसलाई मृत्युसमेत पठाइएको छ। भाँडाका लागि मानिसको जीवनलाई खतरामा पार्नु हुँदैन। "
सार्वजनिकको साथ साझेदारी गर्नुहोस्, MECLIS मा सारियो
बिस्टेक जिल्लाको बोझ्याइक जिल्लामा निर्माणाधीन सुरुnelमा गाईड रेलको रेलगाडी पछाडि एस्कीहेर मसिना डाक्टर सेदत यर्टसेभर र रिसेप टुनाबयलुले आफ्नो ज्यान गुमाए। सीएचपी एस्कीहिरका डेप्युटी उत्कु अकाकर्जले दुर्घटनाको पछाडि गम्भीर दाबीहरू जनतासँग साझा गरे र उनीहरूलाई सम्मेलनको एजेन्डामा पुर्‍याए।
सबै ESKİŞEHİR कानून ड्रोन
इजकियिरको बोज्याकमा रेल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने इञ्जिनियरहरूले भने, 'यासा दुई मेसिनवादी अनुभवी व्यक्ति हुन्। दुर्घटना पछि दुर्घटना दावीहरू पेश गरियो। जब हामी साथीहरू, सहकर्मीहरू र Eskişehir मेसिनिस्टहरूको रेलमार्गहरूसँग कुरा गर्छौं, कसैले पनि गल्ती गर्न यी व्यक्तिहरूलाई बेवास्ता गर्दछ। यो भनिन्छ कि एक महिना अघि मेमोरियल सडकमा, गाईडमा भएका प्रणालीहरू सक्रिय पारिएनन् र समस्या भएका समस्याहरूका बारे चेतावनी दिए। यद्यपि यो गम्भीर कुरा हो कि केहि पनि गरिएको छैन। यी दाबीहरू तुरुन्तै सार्वजनिक गरिनु पर्दछ र जनतामा ज्ञान हुनु पर्छ। ”
Iakırözer ले भने कि तीव्र गति रेल लाइन मा काम गंभीर दाबी पूरा हुनु अघि शुरू भयो।
पारम्परिक लाइन मार्फत यातायात: यो थाहा छ कि सुरुnel खण्डको कारण दुर्घटना भएको टनेलको साइट, सम्पूर्ण टनेल खोल्न सकिएन र बे बेस्ट लाइन बनाएर पारम्परिक लाइनमा जडान भयो। सबैलाई यो थाहा छ कि उच्च-स्पीड रेलहरू बनाउने लाइनहरू कुर्न नहुनुपर्दछ, र त्यहाँ परम्परागत लाइन पनि हुनुहुन्न। तर यो भन्न को लागी हामीले सडक बनाएका छौं, हामीले रेल लाईनहरु विस्तार गरेका छौं, यी सडकहरू गम्भीर अवस्थाको बावजुद सेवाका लागि खोलिएका थिए। यदि रेखा यस ब be्ग भएको ठाउँमा राखिएको छ भने, उच्च-गति रेलहरू चल्नु हुँदैन।
त्यहाँ निर्माण कार्यहरूमा अभियानहरू छन्: Eskişehir stİstanbul ट्रेन लाइन उडानहरू जुलाई 25 मा पूर्ण सुरु हुनु अघि शुरू भयो। यस लाइनमा उडानहरू पुरानो लाइनहरूमा बनेका थिए, जुन प्रयोग गर्न सकिदैन किनकि सडकहरू त्यसबेलादेखि पूरा भइसकेको छैन। उनीहरूले पुरानो लाइनबाट सडक पनि दिए किनकि हाईस्पीड ट्रेन सुरु tun दुर्घटना भएको ठाउँमा समाप्त भएन। यस सडकको निर्माण अझै भइरहेको छ। सुरुnel भित्र नयाँ लाइन देखि पुरानो लाइन को लागी एक मार्ग छ। संक्रमण मा एक तेज मोड़ छ। गतिमा परिवर्तन छ। गति कम गर्नु आवश्यक छ।
यूरोपियन ट्रेन नियन्त्रण प्रणाली सक्रिय गरिएको छैन: त्यहाँ ERTM प्रणाली छ जुन ट्रेनहरूमा नियन्त्रण प्रदान गर्दछ। यस प्रणालीले लोकोमोटिभमा सडकमा सबै जानकारी बोक्दछ र ईन्जिनियरलाई चेतावनी दिन्छ कि कहाँ र कती चाँडो यो पास हुनेछ। ERTM प्रणाली ड्राइभर को सम्भावित त्रुटि हटाउन को लागी स्थापित गरीएको थियो। हामी भन्छौ कि हामी उच्च गतिको रेलहरू चल्छौं, तर हामी विभिन्न प्रणाली प्रयोग गर्दछौं। यदि चालकले यस समयमा गति कम गर्दैन भने, यो प्रणाली स्वत: सक्रिय हुन्छ। तर यहाँ प्रणाली त्यो क्षण मा काम गरीरहेको छैन, सक्रिय छैन।
मेकानिक्स द्वारा चेतावनी: यो ज्ञात छ कि यस सडकमा यात्रा गरेका मशिनीहरूले चेतावनी दिएका थिए कि ERTM प्रणाली काम नगरेको थियो र प्रणाली आवश्यक समयमा सक्रिय भएको छैन।
बहु प्रणाली उच्च गति ट्रेन मार्गमा प्रयोग गरीन्छ: जबकि ERTM प्रणाली Eskşehir बाट एस्कीबिर - इस्तानबुल उच्च गति ट्रेन सहीमा ECTehir बाट निस्कनमा प्रयोग गरिएको छ, CTC प्रणाली Eskişehir पछि प्रयोग गरिन्छ। Izmit पछि, त्यहाँ समान प्रणालीमा TMİ भन्ने प्रणाली छ।
एक मात्र प्रणालीलाई उच्च गति रेलहरूको आवश्यकता पर्दैन: अर्को शब्दहरुमा,3सँग एस्कीहिरबाट इस्तानबुल सम्मको छुट्टै प्रणाली छ। संसारमा यस्तो कुनै चीज छैन। एक उच्च प्रणाली को लागी हाई स्पीड ट्रेन को उपयोग को स्थिति कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो कारको साथ शहरहरू बीच यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तर केहि सडक मार्ग, केहि सडकहरू गाउँ मार्ग, केहि सडकहरू डामर छ। के यो सम्भव छ?
जनताका जीवनहरू भाडामा लिने व्यक्तिहरू पाउँदैनन्
क्याकिरोजरले भने कि सरकारले सडकहरू खोल्यो जुन भाँडाको सरोकारको अन्तमा कहिल्यै अन्त्य हुदैन विशेष गरी चुनावी समय नजिकमा। सरकारले तीब्र इलाकाको मार्गमा सबै आवश्यक कामहरू पूरा नगरी अभियानहरू सुरू गर्यो। यी अब समाप्त गरिनु पर्छ। भाँडाको खातिर, व्यक्तिको जीवनलाई जोखिममा पार्नु हुँदैन ..
कति पटक जाँच गरिन्छ?
काकरारले उक्त आरोपलाई सम्मेलनको एजेन्डामा पुर्‍याए र यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्री काहित टुरानलाई प्रश्नको उत्तर दिन प्रस्ताव पेश गरे।
काकाजारले मन्त्री काहितलाई निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिन सोधे: mı सडक र लोकोमोटिभमा युरोपियन रेल नियन्त्रण प्रणाली छ जुन दुर्घटना भएको थियो? यो सत्य हो कि यो प्रणाली एक दुर्घटना को घटना मा सक्रिय गरीएको छैन? अन्कारा - इस्तानबुल उच्च गति ट्रेन लाइनमा कति चोटि चेक गरिन्छ? किन केहि उच्च-गतिको रेलहरू निर्माणको लागि प्रयोग गरिन्छ? के यो अझै स an्केत हो कि सडक नियन्त्रणको उद्देश्यका लागि पठाइएको निर्देशित लोकोमोटिभको फिर्ती पछि अन्य दुर्घटनाहरू हाम्रो लागि पर्खिरहेका छन्?
अमेरिकामा 30 घाइते भएका भयानक रेल दुर्घटना 25 / 02 / 2015 अमेरिका 30 घाइतेमा भयानक रेल दुर्घटना: कम से कम अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रेल दुर्घटनामा 30 मान्छे घाइते भएका थिए। Ventura जिल्ला आगो विभागको जानकारी अनुसार, एक्क्सनर्ड शहरमा भएको घटना, 05.40 को समय मा लस एन्जलसको उत्तरपश्चिम किलोमिटरको लगभग 110 किलोमिटर रहेको छ। अफगानिस्तानले मेट्रोलिंक ट्राभललाई भने, जो 51 यात्रुहरूको साथ लस एन्जलसको नेतृत्व गरिरहेका थिए, रेलमा ट्रकमा ट्रकबाट हिउँदियो र विनाश भयो। प्रारम्भिक बयानअनुसार,3वागनमा कम्तीमा 30 यात्रुहरू घाइते भएका थिए, जुन बिग्रिएको थियो। घाइते क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। किन ट्रक जो दुर्घटनाको कारणले रेलमा अवस्थित छ ...
मेक्सिको मा डरावनी ट्रेन दुर्घटना (भिडियो) 12 / 05 / 2015 मेक्सिकोमा भयानक रेल दुर्घटना: यस मेक्सिकोमा यो रेल दुर्घटनामा इन्जिनियरिङले मारेको थियो र 12 मान्छे घाइते भएका थिए। अर्को रेलगाडी मेक्सिको सिटीमा स्टेसनमा रोकिने रेल द्वारा हिट थियो। कल, एक विनाशकारी दुर्घटनाको दृश्यमा चालकले मारे। क्षतिग्रस्त 12 यात्रुहरू आसपासका अस्पतालहरूमा लगिएका थिए। क्या भयो स्टेशन को सुरक्षा क्यामेरा मा प्रतिबिम्बित थियो, अधिकारियों को दुर्घटना को जांच ले।
इटालीमा भयानक रेल दुर्घटना 25 / 01 / 2018 मिलान, इटली नजिकै नजिकै एक उपनगरीय रेल व्युत्पन्नबाट विलुप्त भयो। दुर्घटनामा दुई जना मानिस मरे, 10'u गम्भीर घाइते भएकाले 100 ले भन्यो। सेगिगियोओ डि पेओल्टटेलो मा दुर्घटना भयो। क्रिममोनाबाट बाहिर जाने रेल मिलान मिलनबाट भेटेको थियो। थुप्रै अग्नि फायरफुलहरू र एम्बुलेंसहरू दृश्यमा पठाइयो। अधिकारीहरूले भनिन् कि रेल पेइल्टटेल्लामा पुग्यो, जुन मिलानबाट 40 किलोमिटर रहेको छ। स्थानीय स्रोतहरूले रिपोर्ट गर्छ कि 100 हतियार भन्दा बढी अस्पतालमा पठाइएको छ, र कि 10 हतियारहरू गम्भीर छन्। अधिकारियों ट्विटर मा घोषणा को छ कि रेल मा एक तकनीकी गलती छ।
बांग्लादेशमा डरलाग्दो रेल दुर्घटना (भिडियो) 26 / 03 / 2013 बांग्लादेशमा डरलाग्दो रेल दुर्घटना दुर्घटनामा बांग्लादेशमा लिइएको फुटेजमा, रेलमा उभिएको व्यक्तिले पुललाई ध्यान दिदैन, र रेलको पुल भित्र पसेपछि उसको टाउको पुलमा झुन्डिएको छ। ओभर्रोड गरिएको यात्री रेलमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू पुलमा दुर्घटनाग्रस्त भएका र रेलहरूमा खसे। पुल अन्तर्गत रेलमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू विनाशकारी तरिकामा मृत्यु भएको थियो। भारतमा 18 PERSON LIVED उत्तर प्रदेशको अवस्थामा भारत पार्थिवहरू नौकरीमा साक्षात्कारमा भाग लिने 461 व्यक्तिहरूलाई शक्तिमा लिइनेछ, तर युवा 18 खरिदको प्रशोधनको कारण, रेलमा यात्रा गर्दै ...
भयानक केबल कार क्र्यास 20 / 04 / 2012 Trabzon को पक्षमा केबल कार द्वारा राइज को केबल कार पार गर्न को कोशिश गरेर क्रिकेटर मा गिर गयो, जबकि बेबी कार मा लटका छोराहरु को अध्ययन को परिणाम को रूप मा बचाया थियो। जानकारी प्राप्त गरीएको जानकारी अनुसार, बुबा राईको साथ बुबा राईले अलीम वापापुर्को 46 बुबा बुबा अली भोपालcu (एक्सएनएमएक्सएक्स), 11 वर्षीय छोरा अहिम वापुपुरcu 23.30 रिक्किम आइयाइरे जिल्ला जिल्लामा पार गरेको थियो। केबल कार लिनु भएको बुबा र उनका छोराले ट्र्याजोनको जिल्लाको तारारान्सन जिल्लामा केबल कारमा पुग्न खोजे, र केबल कार इइदिरे क्रीकमा उल्टो भयो। बुबा अली भोपालcu क्रेकमा आइपुग्नुभयो र उनको छोरा अहम्मद भोपालcu केबल कारमा लटपिट भयो। ...
- बीबी, सिरकेसी र हैदरपाइन ट्रेन स्टेशनले उनीहरूलाई टेन्डरविना दिन अनुरोध गरे
यस विषयको बारेमा उत्तु एफेन्डीलाई TCDD महाप्रबन्धकबाट जानकारी लिन दिनुहोस् र उसले गलत कुरा गर्नु हुँदैन। tcdd ले यसको कामलाई ठोस बनाउँछ।
अमेरिकामा 30 घाइते भएका भयानक रेल दुर्घटना
मेक्सिको मा डरावनी ट्रेन दुर्घटना (भिडियो)
इटालीमा भयानक रेल दुर्घटना
बांग्लादेशमा डरलाग्दो रेल दुर्घटना (भिडियो)
भयानक केबल कार क्र्यास
Bakırköy मा भयानक मेट्रोबस दुर्घटना को फुटेज प्रकट (भिडियो)
Mersin मा ट्रेन दुर्घटना खोल्यो
अंकारा इस्तांबुल हाइ स्पीड रेल रेखा (फोटो गैलरी) को विवरण
इजमिरमा रेल दुर्घटनाको विवरण
समाचार अभिलेख महिना चयन गर्नुहोस् अक्टोबर 2019 (279) सेप्टेम्बर 2019 (555) अगस्ट 2019 (508) जुलाई 2019 (633) जुन 2019 (504) मई 2019 (526) अप्रिल 2019 (418) मार्च 2019 (521) फरवरी 2019 (483) जनवरी 2019 (502) दायरा 2018 (620) नोभेम्बर 2018 (504) अक्टोबर 2018 (435) सेप्टेम्बर 2018 (517) अगस्ट 2018 (486) जुलाई 2018 (506) जुन 2018 (581) मई 2018 (467) अप्रिल 2018 (545) मार्च 2018 (554) फरवरी 2018 (500) जनवरी 2018 (557) दायरा 2017 (509) नोभेम्बर 2017 (427) अक्टोबर 2017 (538) सेप्टेम्बर 2017 (455) अगस्ट 2017 (505) जुलाई 2017 (479) जुन 2017 (477) मई 2017 (493) अप्रिल 2017 (434) मार्च 2017 (540) फरवरी 2017 (477) जनवरी 2017 (538) दायरा 2016 (487) नोभेम्बर 2016 (631) अक्टोबर 2016 (657) सेप्टेम्बर 2016 (542) अगस्ट 2016 (608) जुलाई 2016 (485) जुन 2016 (661) मई 2016 (664) अप्रिल 2016 (700) मार्च 2016 (804) फरवरी 2016 (855) जनवरी 2016 (751) दायरा 2015 (799) नोभेम्बर 2015 (640) अक्टोबर 2015 (624) सेप्टेम्बर 2015 (428) अगस्ट 2015 (493) जुलाई 2015 (505) जुन 2015 (535) मई 2015 (577) अप्रिल 2015 (622) मार्च 2015 (1017) फरवरी 2015 (878) जनवरी 2015 (1077) दायरा 2014 (963) नोभेम्बर 2014 (826) अक्टोबर 2014 (771) सेप्टेम्बर 2014 (598) अगस्ट 2014 (808) जुलाई 2014 (911) जुन 2014 (735) मई 2014 (957) अप्रिल 2014 (972) मार्च 2014 (864) फरवरी 2014 (720) जनवरी 2014 (733) दायरा 2013 (664) नोभेम्बर 2013 (656) अक्टोबर 2013 (548) सेप्टेम्बर 2013 (570) अगस्ट 2013 (533) जुलाई 2013 (661) जुन 2013 (577) मई 2013 (734) अप्रिल 2013 (1059) मार्च 2013 (1102) फरवरी 2013 (811) जनवरी 2013 (906) दायरा 2012 (911) नोभेम्बर 2012 (1168) अक्टोबर 2012 (830) सेप्टेम्बर 2012 (886) अगस्ट 2012 (974) जुलाई 2012 (863) जुन 2012 (591) मई 2012 (445) अप्रिल 2012 (563) मार्च 2012 (699) फरवरी 2012 (546) जनवरी 2012 (417) दायरा 2011 (149) नोभेम्बर 2011 (35) अक्टोबर 2011 (23) सेप्टेम्बर 2011 (18) अगस्ट 2011 (25) जुलाई 2011 (18) जुन 2011 (16) मई 2011 (13) अप्रिल 2011 (13) मार्च 2011 (33) फरवरी 2011 (24) जनवरी 2011 (13) दायरा 2010 (335) नोभेम्बर 2010 (12) अक्टोबर 2010 (15) सेप्टेम्बर 2010 (12) अगस्ट 2010 (16) जुलाई 2010 (9) जुन 2010 (19) मई 2010 (6) अप्रिल 2010 (3) मार्च 2010 (62) फरवरी 2010 (303) जनवरी 2010 (1838) दायरा 2009 (4) नोभेम्बर 2009 (1) अक्टोबर 2009 (3) सेप्टेम्बर 2009 (3) अगस्ट 2009 (2) जुन 2009 (3) मई 2009 (2) अप्रिल 2009 (3) मार्च 2009 (9) फरवरी 2009 (4) जनवरी 2009 (3) नोभेम्बर 2008 (1) अक्टोबर 2008 (1) सेप्टेम्बर 2008 (2) अगस्ट 2008 (1) जुलाई 2008 (2) जुन 2008 (2) मई 2008 (2) अप्रिल 2008 (1) मार्च 2008 (3) फरवरी 2008 (5) जनवरी 2008 (2) दायरा 2007 (2) अक्टोबर 2007 (2) जुलाई 2007 (1) मई 2007 (1) अप्रिल 2007 (1) फरवरी 2007 (2) जनवरी 2007 (1) दायरा 2006 (1) अक्टोबर 2006 (3) अगस्ट 2006 (1) जुन 2006 (2) मई 2006 (2) अप्रिल 2006 (2) मार्च 2006 (2) नोभेम्बर 2005 (2) अगस्ट 2005 (1) जुन 2005 (1) मार्च 2005 (2) फरवरी 2005 (1) जनवरी 2005 (1) दायरा 2004 (1) अक्टोबर 2004 (3) जुलाई 2004 (1) मई 2004 (2) दायरा 2003 (1) अक्टोबर 2003 (1) मई 2003 (1) मार्च 2003 (1) फरवरी 2003 (1) जनवरी 2003 (1) दायरा 2002 (1) अक्टोबर 2002 (4) अगस्ट 2002 (1) अप्रिल 2002 (1) मार्च 2002 (2) जनवरी 2002 (2) जुलाई 2001 (1) जुन 2001 (1) मार्च 2001 (1) मई 2000 (3) मार्च 1999 (1) अक्टोबर 1998 (2) मार्च 1998 (1) अगस्ट 1997 (1) अक्टोबर 1996 (1) अगस्ट 1996 (2) मई 1995 (1) अगस्ट 1992 (1) मई 1990 (1)